अबदेखि लाइसेन्स निकाल्न नयाँ व्यवस्था : ट्रायलमा आफ्नै सवारी, कुन चरणको अंकभार कति ? –
July 18, 2021 खबर समृद्धLeaveaComment on अबदेखि लाइसेन्स निकाल्न नयाँ व्यवस्था : ट्रायलमा आफ्नै सवारी, कुन चरणको अंकभार कति ?
काठमाडौं, साउन २ – सरकारले तोकेको समयभन्दा ढिलो गरी सवारी लाइसेन्स प्राप्तिको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनको तयारी गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रयोगात्मक र लिखित परीक्षा पास गर्नेबित्तिकै स्थायी (नवीकरण गर्ने गरी) सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाइने अहिलेको व्यवस्था हटाइएको छ ।
‘यसको ठाउँमा १ अबदेखि दुवै परीक्षा पास गर्नेलाई एक वर्षसम्म परीक्षण लाइसेन्स दिइनेछ’ यातायात विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले भने ।
त्यस्तै, अबदेखि चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्नका लागि लिइने प्रयोगात्मक र लिखित परीक्षाको ढाँचामा पनि परिवर्तन गरेको छ । यसअघि शतप्रतिशत (१०० अंक) पास गर्नुपर्ने प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षामा अब ७० अंक ल्याए लाइसेन्स पाउन योग्य मानिने भएको छ । तर, अहिलेसम्म ५० प्रतिशत अंक ल्याए पास हुने लिखित परीक्षा भने अब पास हुन ८० अंक ल्याउनुपर्नेछ ।
तिम्रो लागि हामी छौं चिन्ता नमान’ भन्दै किरण केसीले सम्झाउँदा ‘चम्सुरी’ भक्कानिइन्, मलाई पैसा होइन किड्नी चाहियो भन्दै गरिन् अपिल (भिडियो हेर्नुस्)
आले जस्ता 10 जना, मन्त्री भए अरू कोहि चाहिदैन , क्याप्टेन विजय लामा,
February 1, 2022 खबर समृद्ध
एक बालिकाको उपचार खर्च जुटाउन नसक्दा परिवारको बिचल्ली
September 4, 2021 खबर समृद्ध